Orinasa fanadiovana robot fanadiovana ambongadiny sy mpamatsy | kejia
Manadio ireo kojakoja fanadiovana fanadiovana HEPA ho an'ny fanadiovan-drivotra robotic
Mediam-pitaovana vita amin'ny vera / fibre sentetika
Mety amin'ny Robotic Vacuum Cleaner
Fanary azo asongadina, Fahombiazana avo lenta
Fampiasana indostrialy Fonenana
Ny tranga dia vita avy amin'ny fitaovana ABS avo lenta araka ny habeny tany am-boalohany ary nohomboina tamin'ny fomba ultrasonika mba hifanaraka amin'ny boaty vovoka tonga lafatra.
Mampiasà spaonjy eva avo lenta, mampifanaraka tsara ny sisin'ny boatin-vovoka. Tsy misy famoahana vovoka rehefa manadio ny gorodona amin'ny alàlan'ny fantsom-bolanao ianao.
Naoty - manivana 99.97% ny sombin-drivotra hatramin'ny 0.3 microns. Sivana fanoloana misy fihazonana vovoka avo, tsy misy fotony ny vovoka.
Ny robot manafaingana dia manangona vovoka amin'ny alàlan'ny sivana voalohany sy sivana HEPA tsara, ary ny sivana HEPA dia mitana andraikitra lehibe amin'ny sivana farany. Misy karazany maro ny fitaovana HEPA, izay azo zaraina ho PP (polypropylene) taratasy sivana avo lenta, taratasy sivana biby fiompy, taratasy sivana PP sy PET mitambatra avo lenta ary taratasy sivana fitaratra avo lenta.
Mba hitazomana ny robot-nao hiasa amin'ny tampony fampisehoana dia amporisihina soloina ireo ampahany isaky ny 2-3 volana.
Mora ny soloina sy apetaka amin'ny vovoka robot anao.
Fandefasana boaty volontsôkôlà mba tsy ho simba amin'ny fitaterana.
Ny efijery sivana amin'ny robot manapoka dia ny sivana HEPA indrindra, izay ampiasaina hanivanana ny vovoka tsoka entin'ny mpamafa, izay entina amin'ny rivotra indray, ka mahatonga ny fahalotoan'ny rivotra faharoa. Amin'izao fotoana izao, ny efijery sivana an'ny mpamafa dia amin'ny efijery sivana HEPA amin'ny ankapobeny, saingy tokony hitandrina ny faritra misy ny sivana amin'ny mpanasa lamba isika. Arakaraka ny maha lehibe kokoa ny faritra no mihalava ny androm-piainan'ny serivisy ary mihabe ny fanoherana ny rivotra.
Hosaronan'ny vovoka ny sivana aorian'ny fotoana maromaro, fa ny lamba fanivanana amin'ny ankabeazan'ny robot manasa ny gorodona eny an-tsena dia tsy azo hosasana, ka mila soloina matetika. Ho an'ny fahasalamantsika, matetika dia asaina soloina ny lamba sivana isaky ny telo volana. Ny robot manaparitaka sasany dia afaka manamarina ny fampiasa amin'ny alàlan'ny fampifandraisana amin'ny app sy manolo azy ireo araka ny bitsika.
Teo aloha: Sivana pleat mini tena mahomby
Manaraka: Car sivana kabine